မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-04 > ယုံကြည်ခြင်း၏iantရာမ Be
ယုံကြည်ခြင်းရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်ချင်သလား။ တောင်များကိုရွေ့လျားစေနိုင်သောယုံကြည်ချက်တစ်ခုလိုချင်ပါသလား။ သေလွန်သူများကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနှင့်partရာမလူသတ်သမားကိုသတ်ဖြတ်နိုင်သောဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလော။ သင်၏ဘ ၀ ၌မင်းတို့ဖျက်ဆီးလိုသောကုမ္ပဏီကြီးများစွာရှိနိုင်သည်။ ငါအပါအ ၀ င်ခရစ်ယာန်အများစုနဲ့လည်းဒီလိုပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းgရာမကြီးဖြစ်ချင်သလား။ သင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်တစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်။ မရပါ။
သက်သေလေး ဦး ကိုယေရှုဖော်ပြခဲ့သည်
သူ၏စကားကိုနားထောင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုနေ့၌မြစ်နားသို့ ရောက်၍၊ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေကြ၏။ ထိုနေ့၌သင်သည်ယေရှု၏စကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါကယေရှု၏သွန်သင်ချက်များနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများအပေါ်သံသယ ၀ င်မိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ယော်ဒန်မြစ်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏အသံကိုသင်ကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံး၌သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးသက်သေခံချက်ကိုပေးသည်။ ဒီသက်သေကဘယ်သူလဲ။
In dieser Geschichte steht David jedoch nicht repräsentativ für uns persönlich. Wir sollten uns also nicht an seiner Stelle sehen. Als Vorboten des Künftigen bezeugte er Jesus wie schon die anderen im Hebräerbrief genannten Zeugen. Repräsentativ für uns stehen die Heere Israels, die vor Goliat ängstlich zurückwichen. Lassen Sie mich darlegen, wie ich das sehe. David war ein Schafhirt, aber in Psalm 23 verkündet er: «Der Herr ist mein Hirte». Jesus sprach von sich: «Ich bin der gute Hirte» (Johannes 10,11). David stammte aus Bethlehem, wo auch Jesus geboren wurde (1. ထိုင် ၂7,12). David sollte sich auf Geheiss seines Vaters Isai zum Schlachtfeld aufmachen (Vers 20) und Jesus sagte, er sei von seinem Vater ausgesandt worden.
König Saul hatte versprochen, jenem Mann, der Goliat zu töten vermag, seine Tochter zur Frau zu geben (1. ထိုင် ၂7,25). Jesus wird bei seiner Wiederkunft seine Gemeinde ehelichen. 40 Tage lang hatte Goliat die Heere Israels verhöhnt (Vers 16) und gleichfalls 40 Tage lang hatte Jesus gefastet und war in der Wüste vom Teufel versucht worden (Matthäus 4,1-11). David wandte sich Goliat mit den Worten zu: «Am heutigen Tag wird der Herr dich mir ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abschlagen» (Vers 46 Zürcher Bibel).
Von Jesus wiederum wurde im 1. Buch Mose prophezeit, er werde den Kopf der Schlange, des Teufels, zertreten (1. ကြွက် 3,15). Sobald Goliat tot war, schlugen die Heere Israels die Philister in die Flucht und töteten viele von ihnen. Die Schlacht war jedoch bereits mit dem Tod Goliats gewonnen.
Paulus drückt es folgendermassen aus: «Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben» (Galater 2,19 - 20) ။
သင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်အောင်မြင်မှုများအားဖြင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းaရာမဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေရန်ဘုရားသခင်ထံစိတ်အားထက်သန်စွာတောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်တစ်ခုတည်းဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းgရာမဖြစ်ပြီးသူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူနှင့်သူအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုကျော်လွှားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုရှေ့ပြေးထားပြီးစုံလင်စေသည်။ ရှေ့သို့ ဂေါလျတ်နှင့်အတူဆင်း!